Allgedo.com » 2012 » November » 17
Home » Archive Daily November 17th, 2012
Abaabulo dagaal oo kadhan ah Shabaab-ka Hiiraan oo soconaya
Qeybo katirsan gobolka Hiiraan ayaa waxa abaabulo dagaal oo kadhan ah Shabaab ka wada ciidamo isugu jirwa kuwa Ahlu Sunna Waljamaaca iyo ciidamada Itoobiya. Saraakiil katirsan ciidamada Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa sheegay in ay qorshayaan weeraro deg deg ah oo ay ku qaadaan ciidamada Shabaab ee kusugan magaalooyinka Buulo-Burde iyo Jalalqsi ee gobolka Hiiraan. Isagoo lahadlayay qaar kamid ah saxaafada...
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal xoogan oo ciidamo katirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen magaalada kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Dagaalkan ayaa si gaar ah kaga dhacay Jaamacada Magaalada Kismaayo, kadib markii ciidamada Shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen halkaas oo xarun weyn u ahayd ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlada. Labada dhinac ayaa isku adeegsaday hub xoogan, iyadoona aan la...
Ciidamada Huwanta ah oo kuwajahan Magaalada Jowhar
Ciidamada iskaashanaya ee dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa weerar xoogan ku ah magaalada ay Shabaab ku xoogan yihiin ee Jowhar. Dad kusugan gobolka Sh/Dhexe ayaa sheegaya in Ciidamada Dowlada iyo kuwa Amisom ee ku sugan duleedka magaalada Jowhar ay saaka udhaqaaqeen dhanka magaalada Jowhar. Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlada ayaa la sheegaya inay ka dhaqaaqeen deegaanka Qalimow ee Duleedka magaalada...